को हुन् कुलबहादुर ? | BIVAS
← राष्ट्रपतिको पत्रपछि सेनाको आकस्मिक बैठक
प्रधानमन्त्रिद्वारा राजिनामा →
को हुन् कुलबहादुर ?
कामु प्रधानसेनापतिमा नियुक्त कुलबहादुर खड्काको जन्म लमजुङको भलायखर्क गाविस-४ मा सुकबहादुर तथा भक्तिकुमारीको कोखबाट ५७ वर्षपहिले भएको हो। गाउँकै ज्ञानोदय प्राथमिक विद्यालयबाट प्रारम्भिक र मिसन स्कुल आँपपीपल गोर्खाबाट माध्यमिक शिक्षा लिएका उनले एसएलसी भने काठमाडौंको जुद्धोदय पब्लिक हाइस्कुलबाट गरेका हुन्। अस्कलबाट आइएससी गरेका उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमए र काइदे आजम विश्वविद्यालय इस्लामावादबाट एमएससी गरेका छन्।
२०२८ सालमा सैनिक सेवा प्रवेश गरी बेलायतको स्यान्डहर्ष्टबाट अधिकृत आधार तालिम लिएका उनले नेपाली सेनामा सहायक सेनानीबाट सुरु गरेका थिए। उनले बेलायतबाट नै स्टाफ कलेज गरी नेपाल भारत र अमेरिकामा विभिन्न सैनिक कोर्ष गरेका छन् भने पाकिस्तानबाट सेनाको सर्वोच्च कोर्ष नेशनल डिफेन्स कोर्ष गरेका छन्।
सेनाको सकल दर्जा तथा अधिकृत क्याडेट साथै कम्ब्याट इन्जिनियरसम्बन्धी शिक्षण कार्यका साथै लामो समयसम्म उनी गणपति तालिमको प्रमुख शिक्षक थिए। नेपाली सेनाका कमाण्ड तथा स्टाफ कलेजका संस्थापक मुख्य शिक्षक भई पछि सोही कलेजमा उनी लामो समयसम्म शिक्षा प्रमुख रहे।
२०४५ सालमा सुनकोशीमा आएको बाढीले अरनिको राजमार्गको लामो साँघु बाह्रबीसे खण्ड भत्किएपछि उनैको नेतृत्वमा छोटो समयमै उक्त बाटोको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको थियो।
संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा नेपाली सेनाको प्रतिनिधित्व गर्दै शान्ति स्थापना कार्यमा दुई पटक भाग लिइसकेका उनले देश विदेशका विभिन्न सेमिनार तथा कार्यशालामा सहभागी भएका थिए। नेपाली सेनाको प्रतिनिधित्व गर्दै चिफ अफ डिफेन्स सेमिनारमा समेत उनी सहभागी भएका छन्।
उनले जंगी अड्डामा विभिन्न स्टाफ कार्य गरी व्यवस्था तथा युद्धकार्य महानिर्देशक र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालयमा सहसंयोजकको समेत कार्यभार सम्हालेका छन्। २०६४ असार ७ गते रथीमा पदोन्नति भएका उनी हाल सेनाका बलाध्यक्ष छन्। उनका श्रीमती, एक छोरा र एक छोरी छन्।